Waa hadaad Run sheeg tahay!!!1 | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Waa hadaad Run sheeg tahay!!!1
Nabad iyo is-gacalaysi in lagu wada dhaqaaqo Cid walba ayay dan u tahay. In wixii dhacay layska hilmaamo waa dan guud. Hase yeeshee haddii aan la Qorin wixii dhacay, haddaan Gardarrada la saarin Ciddii wax bi’isay…Documentary
Haddaan Runta laga sheegin Ciddii wax marin habaabisay, haddaan la tilmaamin Ciddii dhibka keentay, haddaan Taariikhda Runta laga sheegin sidee looga hortagi doonaa dhibka dambe oo iman doona? Sidoo kale, Taariikhda lagama beensheego, lama mari habaabiyo, lama dhalanrogo,waa hadaad Run sheeg tahay.
Xaqiiqada waa mid la baadi goobo oo loo huro Waqti, Taariikhda waa la Qoraa meel baana lagu kaydiyaa. Dib ayaa loo xusaa inaan dhacdooyinka dhibaatada Dadka iyo Dalka u keenay kuwo lamid ah ayna dib noogu soo noqon. Ayadoo laga runsheegayo, Hala isku dayo in dib loo aruuriyo dhibkii dhacay iyo sababbihii dhibaatooyinkaas keenay, iyadoo laga afeefanayo inaan la abuurin dhacdooyin keeni kara Boogo cusub.
Fiiro gaar ah: Dhib kasta oo meel walba oo Dunida ka dhacay waa Qoran yahay, kii xumaana waa la dhaleeceeyaa, kii fiicnaana waa lagu daydaa.
Nasiib daro, Soomaalida khaar ka mid ah Dhaqankooda Maantay wuxuu ku jahaysan yahay:
Kii xumaa yaan la sheegin wayo isku hayb baan nahay. Tuuggii yaan farta lagu fiiqin waayo waa Ina Adeerkey. Khaa’inkii yaan la dhaleecayn. Diradiraalihii yaan la qoonsan. Beenlowgii yaan warkiisa la burin. Hudhudka yaan layska qaban. Ninkayga Dilaagaa oo damiir laawaha ah haloo Ceebqariyo, Runta ha laga gambado, Beentana ha laysaga markhaati kaco.
Aqristayaasha Sharaftalahow intee baad aragteen KUWO Qabiilku dhuuxa ka galay oo baadilka Difaacaya salaadana safka hore ku jira? Aqristayaasha Sharaftalahow intee baad aragteen KUWO xadiiska meerinaya, Aayad Qura’aana daliilsanaya Dilka iyo Xaqdaradana ku Garab istaaga Dagaal Oge dan shisheeye wada.
Iskeedana Saxaafadda Madax bannaanu waxay ku nooshahay inay soo shaaciso dhacdooyin laga diimoonaa ama laga beensheegay. Waxaa kaloo jira, in Maanta la haysto Qalab Dhacda kasta lagu qabto oo lagu kaydiyo Maqal iyo Muuqaal ahaan iyo Muuqaal ahaanba.
Waxaa la joogaa casri Runta iyo Beenta aan laysku qaldi karin oo wax walba si cad loo muujin karo. Been lasoo dhodhoobay ciduuna kaama qaadan karto. Waxaa kasii daran in been lagugu barto oo waxaan jirin loo qaato intii Akhrisan jirtey Qoraallada aadmsoo Bandhigto. Run baa reerka lagu dhaqaa!!
Moment Media Group Online ayadoo ogsoon inay Runtu qaraar tahay ayaa Tiirarka Aas-Aaskeedaa waxaa kamid ah in Xaqiiqada la iiftiimiyo.Moment Media Group Online waxey heshay Daawada Hudhudka: Waxey ku Daaweeneysaa inay Runta side tahay u sheegto ayadoo Sadexda Boqol a iyo Lixdanka grad dhinacnah aan dhaafeyn.
Moment Media Group waxaa lagu amaanay Documentaryaalka Maqal iyo Muqaalka ah oo marag madoontada ah oo ay Ummada Soomaaliyeed had iyo jeer usoo Bandhigto. Bal u fiiso Documentryada iyo Wareysiyada SYL-ka, bal u fiiso Shaqsiyaadkii Soomaaliya Caalamka ku xiray oo ka muuqda taxanaha Dhacda Ugub ah, bal u fiiso Cilaaqdii Dagaalada Sokeeye iyo Qaabkii ay wax u dhaceen. Xogtaas hadii aadan heli laheyn side baad ku ogaan laheyd Maxaa Run ah maxaase Been Abuur ah.
Kartoonistaha Amin Camir Oo Sawir Qosol Badan Ah Ka Sameeyey Madaxweyne Siilaanyo Oo Daadahaynaya Xisbiyada Soo Baxay Safiirada Somalia ee dibeda oo la xadiday & qaar ka mid ah shaqaalaha W/Arrimaha dibeda oo la eryey